Amazon Books စတိုးမကြာမီဖွင့်တော့မည့် Boston သည် eReaders အားလုံး
အမေဇုံသည်၎င်း၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစတိုးဆိုင်များကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်သည်။ အချိန်တိုအတွင်းတွင်ဖြစ်ပျက်ပုံရသောအရာဖြစ်သည်။ စပိန်မြို့များ၊ ပဲရစ်သို့မဟုတ်လန်ဒန်ရှိအမေဇုံစာအုပ်များကိုကျွန်ုပ်တို့မတွေ့ရသော်လည်းအမှန်တရားမှာ ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်၊ အမေဇုံစတိုးဆိုင်များကိုတွေ့ရလျှင်.
ပုံရသည် အမေဇုံစာအုပ်များရှိမည့်ဘော်စတွန်မြို့တော်။ ပိုပြီးတိကျစွာပြောရမယ်ဆိုရင် အမွေရာဌာန Place Mall မှာ ဤစတိုးဆိုင်မည်သည့်နေရာတွင်ရောက်ရှိမည်နှင့်တရား ၀ င်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Amazon Amazon Books တည်နေရာအတွက် ၀ န်ထမ်းများကိုရှာဖွေပြီးဖြစ်သည်။
ဘော်စတွန်အမေဇုံစာအုပ်များစတိုးသည် ၀ န်ထမ်းများအားထိုတွင်အလုပ်လုပ်ရန်ရှာဖွေနေသည်
အလုပ်နေရာနှင့်နေရာအားဖြင့်ပေါ်လာသောလက္ခဏာများအရ, Amazon စတိုးသစ်သည်အခြားစတိုးဆိုင်များနှင့်များစွာကွာခြားမည်မဟုတ်ပါအထူးသဖြင့်စတိုးဆိုင်တွင်ရောင်းချမည့် Amazon ထုတ်ကုန်များနှင့်စာအုပ်များရောင်းချခြင်းနှင့်အတူတူပင်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုလိုက်နာပြီးဖြစ်နိုင်သည်။ Createspace စာအုပ်များနှင့် Amazon အရောင်းရဆုံးစာအုပ်များ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ စတိုးဆိုင်အတွက်မှာယူသည့်အမိန့်နှင့်အမိန့်များကိုသင်စုဆောင်းနိုင်သည်၊ အမေဇုံစာအုပ်များစတိုးဆိုင်များနှင့်အမေဇုံ Pop-up စတိုးဆိုင်များတွင်လည်းမှန်ကန်သည်။
မည်သည့်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, နှင့်အတူ Boston ရှိ Amazon Books စတိုးသည် Amazon ၏တတိယမြောက်စတိုးဆိုင်ဖြစ်သည် ဖြစ်နိုင်သည်မှာယခုနှစ်အတွင်းနောက်ဆုံးပေါ်မဟုတ်သည့်အပြင် popup စတိုးများလည်းဆက်လက်သိရှိမည်ဖြစ်ရာ Amazon ၏အွန်လိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း၌ရှိလိမ့်မည်မဟုတ်သော်လည်း၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစတိုးဆိုင်များသည်အွန်လိုင်းစတိုး၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုလက်ခံမည်လား။ သငျသညျယခုအချိန်တွင်တောင်းဆိုမှုများနှင့်ပြန်လာနိုင်သလား? အွန်လိုင်း ၀ န်ဆောင်မှုမှတိုင်ကြားမှုများကိုသူတို့စုဆောင်းနိုင်မည်လား။ သင်ဘယ်လိုထင်ပါလဲ? Boston သို့မဟုတ် Seattle တို့ကဲ့သို့သောစတိုးဆိုင်များသည်ထိုအန္တရာယ်များကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်ဟုသင်ထင်ပါသလား။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - eReaders အားလုံး » ယေဘုယျ » NOTICIAS » Amazon Books စတိုးမကြာမီဖွင့်လှစ်တော့မည့်ဘော်စတွန်ရှိလိမ့်မည်